Union na -akwụ ụgwọ ụgbọ elu Qantas maka oke nchụpụ ọrịa na mmeri
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Union na -akwụ ụgwọ ụgbọ elu Qantas maka oke nchụpụ ọrịa na mmeri
Airlines • Airport • Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ụlọ ikpe gọọmenti etiti Australia kwadoro ikpe ndị otu na -ahụ maka ndị ọrụ ụgbọ njem megide Qantas.
Qantas chụpụrụ ihe karịrị ndị na -ahụ maka ala 2,000 n'oge ọrịa a.
Qantas wepụtara ọrụ ịchekwa ego maka ụlọ ọrụ ahụ.
Qantas dekọtara AU $ 18 ijeri ($ 13.2 ijeri) na ego ha nwetara na 2019.
N'ime mkpebi dị ịrịba ama, ụlọ ikpe gọọmentị etiti Australia adabarala na Wortù Ndị Ọrụ Ụgbọ njem n'okwu nke TWU wetara megide Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Qantas Airways Limited.
Ndị otu ahụ kpụrụ nnukwu ụgbọ elu Australia gaa ụlọ ikpe mgbe asịrị mpụga ahụ hụrụ ka ewepụrụ ndị ọrụ 2,000 Qantas n'etiti ọrịa COVID-19.
Qantas chụpụrụ ihe karịrị ndị na -ahụ maka ala 2,000 n'oge ọrịa a, bụ ndị a napụrụ ọrụ ya ịchekwa ego maka ụlọ ọrụ ahụ, nke na 2019 dekọtara AU $ 18 ijeri ($ 13.2 ijeri) na ego ha nwetara.
Onye ọka ikpe Michael Lee kwuru na ya ekwenyeghị n'ihe akaebe Qantas - ụlọ ọrụ ụgbọelu kacha nwee ike na Australia - na ịchụpụ ọtụtụ puku ndị ọrụ abụghị, ọ dịkarịa ala, akụkụ nke ndị otu ha kpaliri.
TWU goro Josh Bornstein ka ọ bụrụ onye isi ọka iwu ka ọ rụọ ụka na omume ụgbọ elu ahụ megidere Iwu Fair Work. Okwu a gbadoro ụkwụ na ebubo na mkpali oke egwu nke Qantas - nke onye isi ala Alan Joyce na -edu - mere ka ọ mebie ikike otu n'otu na mkparịta ụka ụgwọ ọrụ.
Bornstein kwuru, "Courtlọ ikpe etiti achọpụtala na nke mbụ na onye isi ọrụ chụrụ ihe karịrị ndị ọrụ 2,000 n'ihi na ọ na -achọ ịnapụ ha ikike ijikọ ọnụ na ụlọ ọrụ maka nkwekọrịta ụlọ ọrụ ọhụrụ," Bornstein kwuru.